शिक्षामा राजनीतिको वर्तमान असर झल्काउने सुपरहित फिल्म ‘छक्का पन्जा–३’ युट्युवमा सार्वजनिक'(हेर्नुहोस् पुरा चलचित्र ) ! – live 60media
शिक्षामा राजनीतिको वर्तमान असर झल्काउने सुपरहित फिल्म ‘छक्का पन्जा–३’ युट्युवमा सार्वजनिक'(हेर्नुहोस् पुरा चलचित्र ) !
सुपरहित फिल्म ‘छक्का पन्जा–३’ सार्वजनिक भए’को छ । हाइलाइट्स नेपालको युट्युव’मार्फत फिल्म बुधबार साँझ सार्वजनिक भएको हो ।फिल्म सार्वज:निक भएको २४ घन्टा पनि न’बित्दै युट्युव ट्रेन्डिङमा आउन समेत सफल भएको छ ।
समाचार तयार गर्दा’सम्म फिल्मले ७ लाख बढी दर्शक पाउँदै युट्युव ट्रेन्डिङको छैठौं स्थान ओगट्न’ सफल भएको हो । अहिलेसम्म फिल्मले २७ हजार लाईक र करिब’ ४ हजार डिस्ला:इक समेत पाएको छ ।
दिपाश्री निरौलाद्वारा निर्दे’शित फिल्ममा दीपक’राज, दीपिका प्रसाईं, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, शिवहरि पौडेल, बुद्धि तामाङ, लक्ष्मी गिरी’लगायत कला’कारको अभिनय रहेको छ । प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, वर्षा राउत र संजोग कोइरा:ला फिल्ममा अति’थि भूमिकामा देखिएका छन् ।
आमा स’रस्वती मुभिज र आईए’मईएको संयुक्त प्रस्तुति रहेको फिल्मको केदार घिमिरे (माग्ने बुढा) र जितु नेपाल (मुन्द्रे) कार्यकारी निर्माता हुन् । फिल्मको कथा दीपक आफैंले तया’र पारेको हुन् ।
यो पनि :श्वेता खड्काको विवाहपछी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले किन यस्तो भनिन ? (भिडियो सहित)नायिका श्वेता खड्काको विवाह पछी नायिका करिश्मा मानन्धरले यस्तो भनेर फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छिन्, आएको हरेक परिस्थितिको सा,मना गर्दै ,साथै समाजका मुल्यमान्यतालाइ कायम राख्दै र मान्दै जिवनलाइ हिम्मतका साथ जिउन ठुलो आ,ट चाहिन्छ ,
येस्तोमा कतिपय अवस्थामा आफ्ना भावनाहरुलाई पैताला मुनि कु,ल्चिनु पर्ने स्थिति पनि आउँछ । हरेक मानिसको खुसी भएर बाच्न पाउने अधिकार छ ।
पुरुषप्रधान मान,सिकता रहेको हाम्रो यो समाजमा , ठुला ठुला आवाजमा कस्तो प्रकारको महिला सशक्तीकरण कुरा गरिरहेकार्छौ हामी ? जो बि,चरि अवस्थामा छिन र अरुको सहयोगको अ,पेक्षा गरेर आँखा ता,नेर बसेकी छिन !
या जो हिम्म,तका साथ ती सबै स,मस्या:हरुसंग जु,धेर आफुलाइ भित्रैबाट सशक्तीकरण गरेर आफ्नो लागि नयाँ बाटो:को निर्माण गर्दै छिन ,र यो पनि समा’जको अगाडि प्रस्तुत भयेर गर्दैछिन । यो एउटा उदाहरणीय सुरुवात हो ।
जिवनमा परेका भवि,तव्यंले लथा,लिङ्ग हुने होइन कि त्यसबाट सिकेर बलियो भएर अगाडिको बाटो बनाउने हो । समा’जमा जनजागरण कहिले’काही आफै उदाहर’ण बनेर पनि दिनुपर्छ ।
तिम्रो स्टाट्स लेखाइमा भयेको तिम्रा भाव बुझे जस्तो लागेर यी शब्दहरु लेख्दैछु । नवीन वैवाहिक जिव:नको शुभका’मना स्वेता,तिमी वास्तविक जीवनको नाइका हौ ।
← संसारको ध्यान तान्ने सिंहको यस्तो तस्वीर !
श्रीमती परपुरुषसँग गएपछि →